Duraka Kura दुराका कुरा: July 2017
व्रह्मज्ञानीहरूका दृष्टिमा हरेक आधुनिक आविष्कारको ‘आदिस्रोत’ छ । इसापूर्व ३५०० वर्षअघि सुमेरियनहरूले अभिलेखनका लागि प्रयोगमा ल्याएका ‘क्ले ट्याब्लेट’ लाई आधुनिक ‘ट्याब्लेट’ को ‘आदिस्रोत’ मानिएको छ । अहिलेका लिपि र अक्षरहरूको जननी प्राचीन गुफामा लेखिएका भित्तेलेखन हो भनेर धेरै विद्वान्हरूले ठोकुवा गर्दै आएका छन् । घामको गति र चालको आधारमा तयार पारिएको ‘सनडायल’ आधुनिक समय–यन्त्र निर्माणको ‘प्रेरणास्रोत’ मानिन्छ ।
ज्ञान, बुद्धि र विवेक । मनिसलाई सर्वश्रेष्ठ तुल्याउन सघाउने अमूल्य अमूर्त बौद्धिक सम्पदा । यस्ता अमूर्त सम्पदाको ‘आदिस्रोत’ के होला ? खासगरीयिनीहरूको संरक्षण, विस्तार र भण्डारणको ‘आदिस्रोत’ वा माध्यम के होला ?आदिम कालखण्डदेखि हालसम्म यस्ता बौद्धिक सम्पदा कसरी संरक्षित र विस्तारित हुँदै आए ?प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरैबेर घोत्लिनै पर्दैन । यसको सहज उत्तर हो, श्रुतिपरम्परा ।
श्रुतिपरम्पराको महिमा अपरम्पार छ । मानव सञ्चारको अभिन्न अङ्ग । वाणीप्रधान सञ्चार । ज्ञानको अजस्र स्रोत । ज्ञान विस्तारको दिव्य माध्यम । मानव र सभ्यताबीचको पुल । सामाजिक संवादको गतिलो माध्यम । ज्ञानयोग, भक्तियोग र कर्मयोगलाई एक–आपसमा जोड्ने अलौकिक शक्ति ।
दुनियाँ दिनानु दिन प्रविधिमय बन्दैछ । कम्प्युटर, मोबाइल, थरीथरीका चिप्स् तथा एप्स् । हाम्रो जिन्दगी प्रविधिको जालोमा जेलिएको छ । अहिले ‘मेमोरी चिप्स’ जस्ता डिभाइस एवम् किण्डलजस्ता इ–पुस्तकको रजगज छ । यस्तो लाग्छ, प्रविधिमय बन्दै गएको वर्तमान युगमा सुन्दै आदिम लाग्ने श्रुतिपरम्पराको अब कुनै ठाउँ नै छैन । तर कुरा त्यसो होइन ।
आखिर, ‘मेमोरी चिप्स’ मा रहेका तमाम जानकारी पनि मानव जातिले प्रयोग नगर्दासम्म निरर्थक नै रहन्छ । अहिलेका उपकरणहरूले पहिले भएकै विषयवस्तु (ज्ञान) लाई ‘लाउडस्पिकिङ’ वा ‘म्याग्निफाइङ’ गर्ने बाहेक केही गरेका छैनन् । यिनीहरूले हिजोकै उक्ति, सूक्ति, श्लोक, मन्त्र आदिमा रहेका मौखिक सूचनाहरूलाई भण्डारण र विस्तार गर्ने काम गरेका छन् । आधुनिक प्रविधि श्रुतिपरम्पराको विकल्प नभई सहयोगीमात्र हुन् ।
श्रुतिको सीधा सम्बन्ध बोलीसँग छ । बोली मानव सञ्चारको सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित छ । श्रुतिको सर्वव्यापक र चिरस्थायी अस्तित्वबाट श्रुतिपरम्पराको विकास भएको छ, जुन मानव सभ्यताको विकास र विस्तारमा अपरिहार्य तत्व बनेको छ । यही कारण हुनसक्छ, लेख्यपरम्परा र सूचना प्रविधिको चरम विकास भएको वर्तमान युगमा पनि श्रुतिपरम्पराको महत्व कायमै रहेको छ ।
छन्द र लयको माध्यमबाट कुनै पनि विषयवस्तुलाई रमाइलोसँग सम्झन सकिन्छ । यही मान्यताअनुरूप श्लोक, गीत, उखान–टुक्का एवम् सूक्ति बनेको हुनुपर्छ । श्रुतिपरम्परासँग गाँसिएका विविध आयामबाट समाजमा ज्ञानको विस्तारमात्र भएको छैन, पुरानो पुस्तामा विद्यमान ज्ञान नयाँ पुस्तामा सजिलैसँग हस्तान्तरण पनि भएको छ ।
श्रुतिपरम्परा र सिकाइ
सिकाइ र श्रुतिपरम्पराको गहिरो नाता छ । बालमनोविदहरूको भनाइ छ, लालाबालालाई सङ्गीतको माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्छ । सङ्गीतमय परिवेशमा दिइएको शिक्षाबाट केटाकेटीका ‘स्पञ्ज’ जस्तो ग्रहणशील दिमागले यति छिटो ग्रहण गर्छन् कि उनीहरूको जादुमय सिकाइ गतिको कुनै तुलना नै छैन । यही प्रसंगमा महान् ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल (इसापूर्व३८४–३२२) ले मननीय विचार व्यक्त गरेका छन् ।
उनको भनाइ छ, ‘सङ्गीतमा चरित्र निर्माण गर्ने शक्ति हुन्छ । त्यसैले केटाकेटीलाई सङ्गीतको माध्यमबाट शिक्षाततर्फ अभिुखीकरण गर्नुपर्छ ।’ संगीत श्रुतिपरम्पराकै निरन्तरता हो । घरमा राम्रा राम्रा श्लोक र गीत गुनगुनाउँदा बालबच्चाले रमाइलोमात्र मान्दैनन्, त्यसबाट नजानिँदो किसिमले शिक्षा पनि ग्रहण गर्छन् ।
भाषा सिकाइको प्रक्रियामा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । त्यसमा पनि प्राथमिक तहको शिक्षा पद्धतिमा यीमध्ये सुनाइ र बोलाइ नै बढी महत्व दिइन्छ । यसबाट सिकाइमा श्रुतिपरम्पराको महत्व झल्कन्छ । श्रुति–सिकाइका कारण अक्षरसँग अपरिचितहरूले ज्ञान पाउन सकेका छन् । परिणामस्वरूप निरक्षर व्यक्तिमा ‘मुखको सरस्वती’ बाँचेको छ । गुरुकुलीय परम्परामा गुरुले शिष्यलाई मौखिक रूपमा दिएको शिक्षाबाट ज्ञानको विस्तारबाट ज्ञानको विस्तार हुन्थ्यो ।
हाम्रो समाजले श्रुतिपरम्परा, सिकाइ र पठनसंस्कृतिसँग सम्बन्धित थुप्रै रोचक प्रसंग जन्माएको छ । एकपटक सुनेको कुरा सम्झनेलाई श्रुतिधर, राम्रोसँग वेद पाठ गर्न जान्नेलाई पाठक, तीनवटा वेद पाठ गर्नेलाई त्रिपाठी, चालीस अध्याय वेद पाठ गर्नेलाई चालिसे भन्ने गरिएको रमाइलो प्रसंग पाका–पुराना व्यक्तिहरूबाट सुन्न पाइन्छ, जुन आफैंमा श्रुतिपरम्पराको निरन्तरता हो ।
यसैगरी, वेदको ज्ञान भएको व्यक्ति सुवेदी, दुई वेद जान्ने द्विवेदी, तीन वेद जान्ने त्रिवेदी, चारै वेद जान्ने चतुर्वेदी एवम् शास्त्रार्थ गर्ने शास्त्री नामबाट कहलिएको प्रसंग पनि सामाजिक जमघटहरूमा सुनिन्छ । यसले हाम्रो ज्ञान आर्जन गर्ने पद्धति र श्रुतिपरम्परा नातालाई प्रस्ट्याउँछ ।
हिन्दू समाजमा श्रुतिपरम्परा
हिन्दू समाजमा श्रुतिपरम्परालाई मायवी शक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ, जहाँ श्रुतिपरम्परा, ईश्वरतत्व र आध्यात्मिकताको त्रिवेणी भेटिन्छन् । हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार श्रुति ईश्वर–रचित ग्रन्थ हो । ऋषिमुनि ध्यानमग्न भएको समयमा ईश्वरको वाणी सुनेर त्यसलाई लेख्य रूपमा उतारेपछि वेदको जन्म भएको मानिन्छ । वेदलाईश्रुतिकोमूल स्रोत मानिएको छ । वेद हिन्दू धर्मको प्राचीन र सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ मानिएको तथ्य जगजाहेर नै छ ।
प्राचीन समाजमा वेद शब्द गहिरो आस्था र श्रद्धाको द्योतक बन्न पुग्यो । हरेक शास्त्रको रचना भएपछि त्यसका रचयिताले आफ्नो कृतिमा ‘वेद’ शब्द जोडने चलन आयो । जस्तै : धनु विद्या सिकाउने शास्त्रलाई धनुर्वेद चिकित्साशास्त्रलाई आयुर्वेद आदि । कतिपयले महाभारतलाइं ‘पञ्चम वेद’ भनेर पुकारेको पाइन्छ ।
श्रुतिको कुरा गर्दा स्मृतिलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । श्रुति र स्मृतिको सम्बन्ध पनि कम रोचक छैन ।
श्रुतिाई वैदिक परम्परा मानिन्छ भने स्मृतिलाई लौकिक परम्परा । श्रुति वाणीको आधारमा लेखिएको ग्रन्थ हो भने स्मृति मानव बुद्धि र सम्झनाको आधारमा रचित ग्रन्थ । वेदलाई अपौरुषेय कृति मानिन्छ भने स्मृतिलाई पौरुषेय कृति । अर्को शब्दमा भन्दा वेद अलौकिक कृति हो भने स्मृति लौकिक कृति ।
श्रुतिको तुलनामा स्मृति कमसल र कलिलो मानिन्छ । श्रुति अस्तित्वमा आएको धेरै पछि स्मृतिको रचना भएको ठानिन्छ । श्रुति जटिल र दुरुह मानिन्छ भने स्मृति सरस बोधगम्य । श्रुति र स्मृतिको आधिकारिकतबारे विवाद हुँदा श्रुतिलाई नै मान्यता दिने चलन रहेको छ । यद्यपि मनुले श्रुति र स्मृतिलाई समान महत्व दिएका छन् । वृहस्पतिले श्रुति र स्मृतिलाई मानिसको दुई आँखाको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
मनुले समाज र परिवारबारे तयार पारेको संहितालाई मनुस्मृति भनिन्छ, जुन स्मृति ग्रन्थ हो । स्मृतिको आधारमा संकलित ज्ञानको पुस्तकीकृत स्वरूपलाई स्मृति भन्न थालियो । आध्यात्मिक साहित्यका अध्येताहरूगीता, महाभारत, पुराण, विष्णुसहस्रनाम, रामायण आदिलाई स्मृतिशास्त्र मान्ने गर्छन् ।
पश्चिमा श्रुति परम्परा
प्राचीन युनानी साहित्यमा होमरको नाउँ अग्रपंक्तिमा आउँछ । युनानी सभ्यता र संस्कृतिका भरोसायोग्य व्याख्याता मानिएका होमर दृष्टिविहीन थिए । उनीद्वारा रचित विश्वप्रसिद्ध महाकाव्य ‘इलियड’ र ‘ओडेसी’ अलिखित थिए भनेर धेरै अध्येताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा मुखैमुख सर्दैआएका यी महाकाव्यलाई पछिमात्र लिपिबद्ध गरिएको हो भन्ने भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा पश्चिमी विद्वानहरूले श्रुतिपरम्पराबारे विशद अध्ययन गरेका छन् । अमेरिकी दार्शनिक प्राध्यापक वल्टर ज्याक्सन अङ (सन् १९१२–२००३), बेल्जियन इतिहासकार तथा मानवशास्त्री जन भनिसा (सन् १९२९),जोन माइल्स् फोले (सन् १९४७–२०१२) आदि यस विषयका केही चुनिन्दा विद्वान हुन् ।
अङको ‘ओरलिटी एण्ड लिट्रेसी’ (१९८२), भनिसाको ‘ओरल ट्रेडिसन एण्ड हिस्ट्री’ (१९८५), फोलेको ‘द थियरी अफ ओरल कम्पोजिसन’ (१९८८) जस्ता पुस्तक श्रुतिपरम्पराबारे लेखिएका शोधमूलक कृतिका दृष्टान्त हुन् ।
पश्चिमी दुनियाँमा लिखित इतिहासको साथसाथै मौखिक इतिहासको परिपाटी पनि बलियो छ । बूढापाकासँग कुरा गरेर तिनको बाल्यकाल, युवा अवस्था तथा प्रौढ अवस्था तथा तिनले देखेका देश र दुनियाँबारे तयार पारिएको संस्मरणात्मक इतिहास विश्वभरि नै रुचिपूर्वक पढिन्छ । यस्तो इतिहासलाई लिखित इतिहासकै हाराहारीमा आधिकारिक मानिन्छ । आखिर, लिखित इतिहासको स्रोत कुनै न कुनै रूपमा मौखिक परम्परामा आधारित हुन्छन् ।
बेलायतमा सन् १९७३ मा ‘ओरल हिस्ट्री सोसाइटी’ गठन भयो। यसले मौखिक इतिहासलाई बचाउने अभियान अन्तर्गत ‘ओरल हिस्ट्री’ जर्नल प्रकाशन गर्छ । लन्डनबाट प्रकाशन हुने यो जर्नल रुचिपूर्वक पढिन्छ, जसले अन्तरपुस्ता संवादमा ठूलो गुन लगाएको छ ।
अमेरिकास्थित ‘सेन्टर फर स्टडिज इन ओरल ट्रेडिसन’ ले ‘ओरल ट्रेडिसन’ जर्नल प्रकाशन गर्छ । मौखिक परम्पराका अध्येता जोन माइल्स् फोलेको अगुवाइमा सन् १९८६ देखि प्रकाशन शुरु भएको हो । यसमा लोकवाङमय, सांस्कृतिक मानवशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, इथ्नोग्राफ्रीजस्ता श्रुतिपरम्परासँग नाता जोडिएका सम्बन्धी खोजमूलक र गहिरा विषयवस्तुहरू प्रकाशन हुन्छन् ।
श्रुतिपरम्परा र लेख्य परम्पराबीचको सम्बन्ध रोचक छ । यी दुईबीचको नाता–सम्बन्ध कतै परिपूरक त कतै विरोधाभाषपूर्ण पाइन्छ । पश्चिमी गोलाद्र्धमा यसबारे प्रसस्त अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् । लेख्य परम्पराले श्रुति परम्परलाई गुन लगायो वा घाटा पुर्यायो भन्नेबारे परस्पर विरोधी धारणा भेटिन्छन् ।
लेख्य परम्पराले श्रुतिपरम्परालाई लिपिबद्ध गरेर भावी पुस्ताका लागि गतिलो कोसेली दिएको छ । यसबाट छिरल्लिएर रहेका बहुरूपी श्रुतिपरम्परालाई एकै ठाउमा बटुल्ने काम गरेको छ । यस अर्थमा लेख्यपरम्पराले श्रुतिपम्परालाई गुन लाएको देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय विद्वानश्रुतिपरम्परालाई लेख्यपरम्परामा ढाल्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरू श्रुतिपरम्परालाई लेख्य परम्परामा ढालेमा यसको मर्म मर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । यस्तो मान्यता राख्नेमध्ये ग्रीक दार्शनिक सुकरात (इसापूर्व ४७०–३९९) एक हुन् । उनी लेख्य परम्परालाई अमानवीय कार्यको संज्ञा दिन्छन् ।
अङ्ग्रेज दार्शनिक हेनरी सिजविक (सन् १८३८–१९००) पनि यस्तै धारणा राख्छन् । उनको दृष्टिमा मौखिक गाथालाई लेख्न शुरु गर्यो भने त्यसको हत्या गरेको ठहरिन्छ । उनको ठम्याइ छ, ‘जबसम्म मौखिक छ, तबसम्म यसमा जीवन छ, अन्यथा छैन ।’
धेरैको तर्क छ, लेख्य परम्पराले श्रुतिपरम्पराको दायरालाई कमजोर र सीमित बनाइदिन्छ । उनीहरूका मतमा सामाजिक गाथाहरू समाजको फराकिलो घेरामा मौखिक रूपमा विस्तार भएमा एउटै गाथाको धेरै स्थानीय संस्करण जन्मन्छन्, जसले लोकगाथालाई वैभवशाली बनाउँदछ । तर लेख्य परम्पराले भएको गाथालाई पनि सीमित तुल्याइदिन्छ ।
श्रुतिपरम्पराको दुनियाँ अपरिमित छ । हिन्दू, बौद्ध एवम् जैन धर्मका धेरै सिकाइहरू मौखिक नै छन् । किराँतलगायत विभिन्न जनजाति समुदायको धर्मग्रन्थमा वर्णित जीवन र जगतबारेको चर्चा मूलत मौखिक नै छ । हाम्रो लोकवाङ्मयको अथाह भण्डार नै पूरापुर श्रुतिपरम्परामा अडिएको छ । श्रुतिपरम्पराको आलोकमा सिङ्गो मानव सभ्यता जगमगाएको छ ।
[साभार: अन्नपूर्ण टुडे । (साउन १३, २०७४) । सामान्य परिमार्जनसहित । ]
Posted by दुराका कुरा at 9:03 AM No comments:
जनजाति अभियन्ता तथा पूर्वमन्त्री गोरेबहादुर खपाङ्गी (वि.सं. २००३–२०७३) ले जीवनको अधिकांश हिस्सा जनजातिका सांस्कृतिक अधिकारबारे चर्को आवाज उठाएर व्यतित गरे । उनको दलिल थियो, दशैं जनजातिको चाड नभएकोले दशैंको टीका वहिष्कार गर्नुपर्छ । उनै गोरेबहादुर खपाङ्गी २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा सामेल भए । मन्त्री भएपछि राजाको हातबाट चुपचाप दशैंको टीका ग्रहण गरे ।
गोरेबहादुर खपाङ्गीले चुपचाप टीका ग्रहण गरेको जनताको नजरमा छिपेन । पत्रकार उजिर मगरले खपाङ्गीले दशैंको टीका ग्रहण गरेको समाचार ‘कान्तिपुर’ दैनिकमार्फत् ‘ब्रेक’ गरिदिए । खपाङ्गीको बोली र व्यवहारमा भिन्नता दुनियाँ चकित भए । गोरेबहादुर खपाङ्गीले उठाएका दशैं वहिष्कारलगायतका जनजातिका सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू वैकल्पिक धारको पत्रकारितामार्फत् ‘एम्प्लिफाई’ गर्ने काम उजिर मगरलगायतका पत्रकारले नै गरेका थिए ।
‘राजनीतिमा कुनै स्थायी मित्र र सत्रु हुँदैन’ हुँदैन भन्ने भनाइ धेरै हदसम्मपत्रकारिता पनि लागू हुन्छ भन्ने तथ्य मगरले व्यवहारबाटै पुष्टि गरिदिए । उनले आफ्नो ‘करिअर’ को शुरुवती घडीमा जनजातिका सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी मामिलाहरूलाई आमसञ्चार माध्यममा ल्याउने काम गरे ।
के कारण हो कुन्नि, जीवनयात्रा अधबैंशे पयतिर ढल्कँदा–नढल्कँदै उनी अतीतमुखी बन्न पुगेका छन् ।समयको मध्यविन्दुतिर आइपुग्दा उनले अतीतका बाङ्गाटिङ्गा बाटाहरूलाई पछि फर्किएर हेर्न रुचाएका छन् । उनी अतीतगमनमा मगनमस्तबनी समयले पछिल्तिर धकेलिदिएका पलहरूलाई संस्मरणका रूपमा प्रस्तुतगर्दैछन् । यसको प्रमाण हालसालै सार्वजनिक भएको उनका कृति ‘अंश’ मा भेटिन्छ ।
‘हाँक’, ‘समानान्तर’, ‘कान्तिपुर’ र ‘नागरिक’ हुँदै पत्रकारिताको राजनीति माहोमिएका उजिर मगरले आफ्ना कृतिमाविद्यार्थी राजनीतिदेखि पत्रकारितासम्मका यावत् अनुभव र अनुभूतिहरूलाई समेटेका छन् । विद्यार्थी कालदेखि नै नेकपा मसालको राजनीतिमा अभ्यस्त बनेका उनी तत्कालीन समयदेखि नै राजनीतिको हिस्सा बनेको देखिन्छ ।
मगर आफ्नो राजनीतिक संलग्नताखुलेरै बोल्छन् । उनी बाग्लुङको तत्कालीन स्थानीय राजनीतिको धार र अभीष्टबारे लेख्छन्, ‘२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनहाम्रो गाउँमा बेस्सरी लाग्यो । पार्टीले परी थापालाई उठाउने भयो ।..उनलाई जिताइयो । त्यो भेगमा एकप्रकारले बुथ कब्जा गरियो’ (पृ.५) ।
उजिर मगरको पत्रकारिता–यात्रा रोचक छ । उनी २०५१ सालमा भारतको राजधानी दिल्ली पुग्छन्, साहिँली दिदीलाई पुर्याउन । उनको भिनाजु दिल्लीमा काम गर्थे, जो नेकपा (मसाल) समर्थित अखिलभारत नेपालीएकता समाज (हकेसनगर इकाइ समति) का अध्यक्ष थिए । थोरै कमाइमा चारजनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यतमा जेलिएका भिनाजुसँग उनले बाटोखर्च मागेनन् । बरू काम खोजे ।
उजिर मगरले अखिल भारत नेपाली एकता समाज, केन्द्रीय कार्यालयका सचिव धनपति शर्माको सम्पर्कमा आए । शर्माकै कृपाबाट उनले एउटा गार्मेन्ट कारखानामा चौकीदारको काम पाए । महिनामा १५ दिन बिहान र १५ दिन राति ड्युटी बस्नुपर्ने । दिनमा ड्युटी हरेक महिनाको पहिलो हप्ता ‘नेपाली एकता’ म्यागजिन निस्कन्थ्यो ।
दिनमा ड्युटी त्यही म्यागजिन उनको साथी बन्थ्यो । पत्रकारिताप्रतिको लगाव र अनुराग देखेर धनपति शर्माले उनलाई म्यागजिनका लागि समाचार लेख्न लगाए । पत्रकारिताप्रतिको उनको प्रेमभाव त्यहाँ पुगेर फक्रन थाल्यो । उनी अखिल भारत नेपाली एकता समाज (हकेसनगर इकाइ समति) को सदस्य पनि बने ।
त्यस समयमा उनी टाइपिङ सेन्टरमा भर्ना भए । उनमा ‘अब म पत्रकारितागर्न सक्छु’ भन्ने आत्मविश्वास पलायो । चौकीदारी गर्दाको समयमा आर्जेको पत्रकारिताको अनुभव लिएर उनी २०५२ सालमा नेपाल फर्किए । त्यसपछि उनको पत्रकारिता–यात्राविना रोकावट अघि बढ्यो ।
उजिर मगरले आफ्ना कृतिमा यस्तै रोचक संस्मरण पस्केका छन् । ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा आवद्ध भएपछि उनले माओवादी बिट हेर्न थाले । यसपछि विभिन्न समय र सन्दर्भमा माओवादी शीर्षनेतृत्वसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे । तर यसको ‘साइड इफेक्ट’ पनि पुस्तकमा देख्न सकिन्छ । माओवादी नेतृत्वसँगको उनको सामीप्य कतिसम्म बढेको देखिन्छ भने उनी तिनै माओवादीबाट जानेरै प्रयोग भएका छन् ।
गोरखाको एउटा जेलबाट सुरुङ खनेर केही माओवादी फरार भएको एउटा समाचार काल्पनिक भएको उनले १२ वर्षपछि स्वीकारेका छन् । मगरको यो स्वीकारोक्तिले संवाददाता, सम्पादक र मिडिया हाउसकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । उसै पनि पत्रकारिता पेसा विश्वसनीयताको कसीमा कमजोर हुँदै गइरहेको बेलामा मगरले स्वीकारेको त्रुटिले थप प्रश्नहरू उठेका छन् ।
मगरले रिपोर्टिङका क्रममा देखे–भोगेका थुप्रै प्रसंगहरू आफ्ना कृतिमा पस्केका छन् । केशव नेपालले ‘हाँक’ छाड्दा ‘नेपाल बिदा हुनुभयो’ शीर्षकमा फोटोसहित बिदाइ समाचार लेख्दा कतिपयले समाचारै नपढी उनको मृत्यु भएको बुझेको, लिवाङमा प्रेमपूर्वक गोरुको मासु खाएको, जापानी महिला पत्रकारलाई गाउँमा शाकाहारी भोजन भनेर कुखुराको मासु टक्र्याइएको जस्ता प्रसंगले पाठकलाई रोमाञ्चक दुनियाँतिर लैजान्छ । रिपोर्टिङको क्रममा बाटोमा हिँड्दाहिँदै आफूले हलो जोतेको प्रसंगले उनको चुलबुले स्वभावको परिचय दिन्छ ।
सांस्कृतिक रूपमै मदिराभोगी समुदायको भएर होला, उजिर मगरले ठाउँ ठाउँमा मदिराभोगको प्रसंग निष्फिक्री ल्याएका छन् । उनले संगत गरेका सबैजसो पत्रकारसँगको उठबसका प्रसंगहरू पुस्तकभरि छताछुल्ल भेटिन्छन् ।
लेखाइमा लालित्य खोज्ने पाठकहरूले यो कृतिमा त्यस्तो पाउने छैैनन् । लेखाइ नितान्त सरल र सहज छ । त्यसमा आडम्बरी शब्दजाल र कस्मेटिक लेखाइको छनकसम्म पनि भेटिँदैन । नलेखेको भए पनि हुने थियो जस्तो प्रसंगहरू पुस्तकमा छन् । कतिपय सानोतिनो प्रसंगको सूक्ष्म विवरणहरू छन् । यसबाट पुस्तक अनाश्यक रूपमा मोटो हुन गएको छ । लेखाइ खासै विश्लेषणात्मक छैन । कतिपय हरफहरू त घटनाक्रमहरूको टिपोटजस्तो मात्र पनि लाग्छ ।
उनले राजनीतिक नेतृत्व हिजोको मौलिक र जनमुखी सोचाइबाट पथभ्रष्ट भएको र तिनीहरू उच्च आचार–विचारमा गिरावट आएको नजानिँदो किसिमले संकेत गरेका छन् । मगरले एक प्रसंगमा भनेका छन्, ‘रिपोर्टिङसँगसँगै गणतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिँदा अनेक पात्र भेट्टाएँ । तीमध्ये कतिको निधन भयो; कतिले जेलनेल खाए; कति प्रधामन्त्री/मन्त्रीभए; कतिले राजनीतिक नियुक्ति पाए...। ती पात्रहरूलाई अहिले अनेक रूपमा देख्दा कुनै फिल्मका नायक, खलनायक, जोकर देखे जस्तो लाग्छ’ (पृ.३६१) ।
सशस्त्र संघर्षकालको परिशीलनगर्न चाहनेहरूका लागि उनको कृति एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बन्नसक्छ । सशस्त्रद्वन्द्वकालमा गरिएका स्थलगत रिपोर्टिङको अनुभव संगालिएको यो दस्ताबेज युद्ध रिपोर्टिङको अनुभव, कला र सीप जान्न चाहने नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरूका लागि प्रेरणास्रोत बन्नसक्छ ।
पुस्तक : अंश
लेखक : उजिर मगर
प्रकाशक : नाउर प्रकाशन प्रालि
मूल्य : ४७५ रुपैयाँ
[साभार: अन्नपूर्ण टुडे । असार १६, २०७४ । सामान्य परिमार्जनसहित ।]
Posted by दुराका कुरा at 9:17 PM No comments:
Labels: उजिर मगर, कृति समीक्षा